वर्षौंदेखि बेकार फ्यालिएको सिलाई मेसिनको गोप्य घर्रा खोल्दा जे देखियो … « गोर्खाली खबर डटकम
प्रचण्डको ओलीलाई चुनौती– ‘अबको चुनाव जितेर एमालेको प्रधानमन्त्री हुँ भनेर देखाउनुस्’
निर्वाचनमा पार्टीको सफलता उत्साहका रूपमा लिनुपर्छ : मन्त्री झाँक्री
काठमाडौंलाई विश्वकै उत्कृष्ट सहर बनाउन सबैको सहकार्य आवश्यकः मेयर साह
WHO प्रमुखले Weibo, WeChat मा चीनको शून्य-कोविड नीतिलाई ‘अस्थिर’ भन्दै निशाना बनाए
चिनियाँ युआन डलरको तुलनामा 6.7290 मा कमजोर भयो
भारतले संयुक्त राष्ट्र संघमा हिन्दी भाषाको प्रवर्द्धन गर्न USD 800,000 योगदान गर्दछ
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम चास्नीमा नडुबाएको जेरी जस्तो: ओली
संसदमा एमाले नेताको एक स्वर: सरकारले परराष्ट्र नीतिविपरीत कार्य गर्‍याे
२०७८ माघ १२ गते बुधवार प्रकाशित
अमेरिकाको कोलम्बिया सहरमा बस्ने क्याथी अर्नाल्डले ५० वर्ष पुरानो सिलाई मेसिन किन्दासम्म उनलाई पनि थाहा थिएन त्यही मेसिनका कारण उनी निकै चर्चित बन्नेछिन् । जीवनमा हामीसँग कहिले हामीले कल्पना नै नगरेका चीज आउँछन् भन्ने सोच्न सकेत सकिँदैन ।
साउथ क्यारोलिनाको कोलम्बियाकी क्याथी अर्नाल्डने स्थानीय पसलबाट त्यो ५० वर्ष पुरानो सिलाइ मेसिन किनेकी थिइन् । पैसा जम्मा गरेर क्याथीले त्यो मेसिन किनेर घर लिएर आइन् । यो मेसिनको ड्रअरमा केही पुराना कपडा र एउटा कैंची राखिएको थियो ।
जब क्याथीले ड्रअर बन्द गर्ने कोसिस गरिन् उनलाई यस्तो लाग्यो कि त्यहाँ बीचमा केही चीज अड्किएको छ । जब उनले ड्रअरलाई मेसिनबाटै बाहिर निकालिन् उनले मेसिनमा लुकाएर राखिएको निकै सुन्दर चीज भेट्टाइन् ।
यो एक चीजका कारण क्याथी निकै चर्चित भइन् । त्यहाँ एउटा पुरानो चिठी थियो । यो चिठी अमेरिकी सैनिक वाल्टर स्मिथले आफ्नी श्रीमती रोबर्टालाई लेखेका थिए । दोस्रो विश्वयुद्धमा खटिएका वाल्टरले रोबर्टालाई आफूले कति माया गर्छन् भन्ने कुरा चिठिमा बयान गरिएको थियो । यो चिठि पढेपछि क्याथीले वाल्टर र उनको जीवनबारे एक स्थानीय समाचार च्यानलको सहयोगमा खोजी सुरु गरिन् ।
अन्ततः क्याथीले यो जोडीको बारेमा पत्ता लगाइन् । यो जोडीको कुनै सन्तान त थिएनन् तर आफ्नो मायाका कारण छिमेकमा निकै प्रसिद्ध थिए । वाल्टर युद्धमा शहीद भएका थिए र यो चिठि भेटिनुभन्दा पहिले उनकी श्रीमतीको पनि मृत्यु भइसकेको थियो
२३ हजार ५९१ जनालाई जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा दिइयो: राष्ट्रपति
सुन्दा अनौठो तर वास्तविक कुरा ! कहिले सुन्नु भएको छ ढुङ्गामा आगो बाल्दा वाइफाई चलेको कुरा
मोटरसाइकलको ठ-क्करबाट झापामा १९ वर्षीय श्यामको नि धन
एउटा सिक्काको मूल्य २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ ! आखिर के थियो त्यो सिक्काको विशेषता
काठमाडौं महानगरको २७ वटा वडाको मतगणना सकियो, माओवादी निल
भरतपुरमा मतगणना एक लाख पुग्न लाग्दा ८७५६ मतले रेणुको अग्रता